အနန္တကျေးဇူးရှင် ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား	Posted on August 29, 2009	by mettayate ကျမတို့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ နာမည်ခံပေမယ့် တကယ့်တကယ်တော့ ကိုယ့်ဘာသာအကြောင်းကို သေသေချာချာမသိပါဘူး။ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် (မိရိုးဖလာနှင့် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကွဲပြားမှုကို နောက်တင်မည့်ပို့စ်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။) သာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ နေ့ထူးနေ့မြတ်များနှင့် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပွဲ